Tele RELAY တစ်ခု - အဆိုပါကင်မရွန်းပထမသုံးလပတ်အတွက် 4,2 2019% ၏ကြီးထွားမှုနှုန်းကိုဖော်ပြပေး
မူလစာမျက်နှာ » စီးပွားရေး "ဒီကင်မရွန်းပထမသုံးလပတ်အတွက် 4,2 2019% ၏ကြီးထွားမှုနှုန်းကိုဖော်ပြပေး
အဆိုပါကင်မရွန်းပထမသုံးလပတ်အတွက် 4,2 2019% ၏ကြီးထွားမှုနှုန်းကိုဖော်ပြပေး
(ကင်မရွန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံ) - အမျိုးသားစာရင်းအင်းဌာန (NSI) က၎င်း၏အမျိုးသားရေးအကောင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ သူတို့ကကင်မရွန်း 2019 ၏ပထမသုံးလပတ်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုအတွက်တိုးတက်မှုပြဂျီဒီပီ၏ 4,2% ၏ကြီးထွားမှုကဖော်ပြသည်။
အဆိုပါပေးဝေရေးဘက် မှစ. , INS ကပြောပါတယ်, ဒီစွမ်းဆောင်မှုသုံးဒေသများရှိလှုပ်ရှားမှုများ၏အရှိန်အဟုန်ကိုထင်ဟပ်: အကောလိပ်, တက္ကသိုလ်ကဏ္ဍ 1,8 အချက်နှင့်အတူအလယ်တန်းကဏ္ဍကနောက်တော်သို့လိုက်, ကြီးထွားဖို့ 1,5 အမှတ်တစ်ပံ့ပိုးမှုများဖြင့်ဦးဆောင်နေသည် နှင့် 0,4 item ကို select လုပ်ထားတဲ့မူလတန်း။
"အဆိုပါမူလတန်းကဏ္ဍတွင်ပထမသုံးလပတ် 0,4 အတွက်ဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းမှ 2019 အမှတ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထိုကဏ္ဍ၏ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှုကြောင့် compose သောသူအပေါင်းတို့သည်အကိုင်းအခက်များ၏အစုကိုမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းစာစိုက်ပျိုးရေးအစားအသောက်ထုတ်ကုန်၏တိုးတက်လာသောထောက်ပံ့ရေးထံမှထွက်ပေါ်လာသောအဆိုပါဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းမှ 0,2 အမှတ်လှူဒါန်းခဲ့ထားပါတယ်"ဟုအဆိုပါ INS မိန့်တော်မူ၏။ အဆိုပါအင်စတီကျုကဏ္ဍရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်မွေးမြူရေး, အမဲလိုက်နှင့်ငါးဖမ်း (0,1 အချက်) ကို 0,1 အမှတ်တစ်ပံ့ပိုးမှုများဖြင့်သစ်တောကဏ္ဍကထောက်ခံကြောင်းထပ်ပြောသည်။
အဆိုပါအလယ်တန်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအရှိန်အဟုန်ပထမသုံးလပတ် 5,5 နှိုင်းယှဉ် 2018% တစ်ခုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်အောက်ရှိကာလအတွင်းထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒီကဏ္ဍ၏စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုစီကိုဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းမှအပြုသဘောလှူဒါန်းခဲ့အရှိဆုံးကဏ္ဍတွေမှာခိုင်မာတဲ့လုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ 14,3% ၏ကြီးထွားမှုနှင့်အတူသတ္တုတူးဖော်ရေးသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုပိုပြီးတစ်ထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင် 2018 ၏သက်ဆိုင်ရာကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အထူးစွမ်းဆောင်ရည်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါအဆောက်အဦများနှင့်အများပြည်သူအကျင့်ကိုကျင့်ကဏ္ဍ (BTP) 0,3 အမှတ်တိုးတက်မှု၏တစ်ဦးပံ့ပိုးမှုများဖြင့်ယင်း၏အရှိန်အဟုန်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အလားတူပင်, အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းမှ 3,3 အမှတ်အထောက်အကူပြု 2018 အတွက်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 0,2% ပြောင်းလဲပါပြီ။ ပထမသုံးလပတ် 0,2 အတွက်ဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းမှ 2019 အမှတ်တစ်ပံ့ပိုးမှုများဖြင့်အခြားအကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများ, သူတို့ရဲ့ကျိုးနွံဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွေအတွက်အမျှခွဲအခက်များအကြားအချို့ညီမျှမှု mask ။
အမှန်မှာထို INS မှတ်ချက်ပြုသည်ကျွန်းသစ်လုပ်ငန်းတွင်လှုပ်ရှားမှုများ (8,6%), နှင့်အမျိုးသားရေးသန့်စင်ကုမ္ပဏီလှုပ်ရှားမှုများ (ဆိုနိုရာ) ၏ပြန်လည်များ၏အရှိန်အဟုန်ပထမသုံးလပတ်အတွက် 2019 ဌာနခွဲများ၏ကောင်းသောကျင်းပနိုင်ရန်မှအပြုသဘောလှူဒါန်းခဲ့ နေစဉ်အထည်အလိပ်နှင့်အဝတ်အစားစက်မှုလုပ်ငန်း၏ sub-နျဌာနခှဲ, 14,2% ၏အနုတ်လက္ခဏာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအတူမဟုတ်ဘဲတစ်ဘရိတ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
အလားတူကာလပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွက်ကောလိပ်, တက္ကသိုလ်ကဏ္ဍ 3,3 2019 +% ဆန့်ကျင်ပထမသုံးလပတ်အတွက် + 5,8% နှင့်အတူ INS မှတ်စုတိုအလယ်အလတ်တိုးတက်မှုနှုန်းသည်။ "တိုးတက်မှု၏က၎င်း၏အဆင့်သုံးခုကဏ္ဍပျမ်းမျှအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်သော်လည်းဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ 1,8 အမှတ်တိုးတက်မှု၏တစ်ဦးအလှူငွေနှင့်တကွ, သုံးလပတ်အတွင်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုများ၏အင်ဂျင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောဤကိုယ်ဟန်အနေအထားပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး, ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေး မှလွဲ. စက်မှုလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများအားလုံးအကိုင်းအခက်များတွင်တိုးတက်မှု၏တစ်စုစည်းပြီး၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်"ဟုအဆိုပါ INS မိန့်တော်မူ၏။
နေရာထိုင်ခင်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်လှုပ်ရှားမှုများ (+ 3,1%) အဖြစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး (+ 1,2%) ဖူး, အလှည့်အတွက်ပံ့ပိုးမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်, ဒီလေးပုံတပုံဟာသူတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်နှေးကွေး အဆိုပါနီးပါးသုညတိုးတက်မှုနှုန်း။ ထိုကဏ္ဍ၏ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှုဆဲအများပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပေး Non-ဈေးကွက်န်ဆောင်မှုများ၏ volume ထဲမှာကျဆင်းမှုဆင်း 5,2% တူညီလေးပုံတစ်ပုံ 2018 နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးနှင့် 0,7 ပွိုင့်တဲ့အနုတ်လက္ခဏာအလှူငွေအားဖြင့်နှေးကွေးခဲ့သည် ဂျီဒီပီ။
ရထားလမ်းဘေးဥပဒ်ကို Eseka Bolloréဇူလိုင်လ 31 အတွက်သားကောင်များ၏လျော်ကြေး၏စတော့ရှယ်ယာကြာ 2019
ဂီနီ: အ GAC များအတွက်ကုန်ကြမ်းအရိုင်းပို့ကုန် - JeuneAfrique.com